Fahad Yaasiin oo waxba kama jiraan ka dhigay go'aanka Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo waxba kama jiraan ka dhigay go’aanka Rooble
Shan maalin kahor ayuu Rooble xilka qaadis ku sameeyay Saraakiishan katirsanaa NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahad Yaasiin ayaa si rasmi ah u shaaciyay magacaabis uu sameeyay shalay, isagoo waxba kama jiraan ka dhigay go'aan kasoo baxay Rooble Jimcihii oo xilalka looga qaadey Saraakiisha NISA katirsan oo xad-gudubyo sameeyay.
Keydmedia Online ayaa xalay soo qortay [Halkan ka akhri] in Kulane Jiis loo magacaabey xil-sare kadib markii laga qaadey jagadii hore ee ahayd madaxa Shaqaalaha NISA, waxaana hadda Fahad kusoo saarey magacaabistiisa digreeto.
Taliyaha NISA ayaa Kulane Jiis ka dhigay kaaliyaha dhanka siyaasadda iyo Amniga NISA halka C/wahab Sheekh Cali oo ahaa madaxa NISA ee Garoonka diyaaradaha hadda noqonaya agaasimaha qorsheynta iyo tiknoolojiyadda hay'adda Sirdoonka.
Cabaas Yacquub wuxuu bedelay Kulane Jiis, isagoo loo magacaabey agaasimaha Shaqalaaha, waxaana la sheegay in ninkan loo diyaarinayo inuu bedelo Fahad oo ku-sime noqday marka uu raadsado kursiga Gollaha Shacabka.